Xisbul Islaam oo Baladweyne la wareegay & dad lagu laayay magaalada xalay
Shalay Gelinkii dambe ayaa waxaa ay Ciidamada Xisbul islaam ee Fariisinka ka sameystay Buurta Jenda kundisho oo ay isla Maalinimadii shalay ay kala wareegeen Ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ay ku dileen 3qof oo Rayid ah kuwaas oo sida la sheegay ahaa Rakaab.
Lama oga oo lama Xaqiijin karo sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka loo geystay sedaxdan Qof ee rayidka ah, inkastoo ay warar is qilaafsan ka soo baxayaan qaabka uu dilka dadkan u dhacay.
Waxa ay dadka qaarkii sheegayaan in Gaari ay saarnaayeen lagala degay 3dan Qod halka dad kalena ay sheegayaan in Rasaas la hubiyay ka dib markii laga shakiyay, balse Toogashada ay Geysteen Ciidamada Xisbul islaam ee ku sugan buurta Jenda kudisho ayaa waxaa siweyn uga xumaaday dadka reer Hiiraan gaar ahaan kuwa Magaalada Baladweyne.
Saraakiisha ciidamada Xisbul islaam ayaa iyagu ka hadlay falkan dhacay waxaana ay beeniyeen in dadka ay Toogteen ciidamadoodu aanay aheyn dad rayid ah waxaanay sheegeen in dadkaasi ay ahaayeen ciidan siyaasad ama sirdoon ku howlanaa.
Dhinaca kale saraakiisha Xisubul islaam ayaa xalay bandow aan la shaacin ku soo rogay dhanka bari ee magaalada Baladweyne ka dib salaadii cishe ee fiidkii, waxaanay shacabka mar qura ka warheleen ciidamo ka soo foofay xarumahooda kuna amrayay dadka in ay ganacsatadu xiraan goobahooda ganacsi islamarkaana ay ku xeroodaan guryahooda.
Si kastaba ha ahaatee bandowgan ayaan inaba saameyn galbeedka baladweyne mana jiraan ilaa iyo iminka cid la shaaciyay in lagu qabqabtay Bandowgaas marka laga rebo dadka Bariga Baladweyne oo sheeciyay in jirdillo karbaashid ah loo geysta dadka qaar.
Itoobiya oo aamaan darrida Soomaaliya ka jirta sheegtay inay sameyn ku yeelan karto Bariga Afrika
Dowlada Ethopia ayaa sheegtay in amaanka wadamada bariga Afrika uu yahay mid khatar ku jira,iyadoona ay ku soo badanayaan wadamada bariga Afrika gaar ahaan soomaaliya xaalado sababi kara in uu Gobolku noqdo mid uu amaankiisu uu noqon karo mid aan laysku halayn Karin.
Wasiirka arimaha dibada Ethopia Seyoum Mesfin isaga oo kahadlaya amaanka bariga Afrika ayaa sheegay in ay dowladiisu taageero nooc walba ah ay kubixinayso sidii amaanka wadamada bariga Afrika uu unoqon lahaa mid laysku halayn karo oo aan wax shaki ah galin amaanka gobolka.
Hadalka wasiirka ayaa yimd xili ay kulan kulahaayeen golaha wasiirada difaaca ee bariga Afrika EASBRIG caasimada Ethopia ee Addis Ababa maalinimadii talaadada ee aynu soo dhaafnay.
Waxaana golaha ay kumidoobeen wasiirada difaaca ee bariga Afrika EASBRIG ay intii Addis Ababa kulahaayeen kulanka ay si weyn uga wada hadlayeen qalabaynta ciidamada bariga Afrika si looga hortago amaan daro kasta oo soo food saari karta wadamada Barig Afrika.
Seyoum Mesfin waxaa uu kaloo sheegay in aanay wax qiima ah lahayn kulamo ay yeeshaan dowladaha gobolka oo ay kaga hadlayaan amaanka wadamada bariga Afrika,laakiinse loo baahanyahay ayuu yiri in lasameeyo iskaashi xoogan oo looga hortagi karo amaandaro kasa oo soo foodsaari karta wadamada gobolka.
Gobolku waxaa uu xiligan wajahayaa amaandaro iyo nabad la aan kasoo wajahday wadanka soomaaliya oo ah wadanka kaliya ee uu kuyaala bariga Afrika oo qalalaasaha iyo dagaalada wehelka u noqday.
Waxaana soomaaliya ka dagaalamaya sida uu wasiirku sheegay kooxo argagixisa ah kuwaas oo damacoodu yahay in ay qalalaase iyo xasilooni daro ka abuuraan wadamada bariga Afrika iyo caakamkaba.
Ma aha markii ugu horaysay oo uu hadal midkan oo kala ah uu kasoo yeero dowlada Ethopia,iyadoona dhow jeer oo hore sidaas oo kale ay sheegeen in ay soomaaliya kasoo food leedahay amaan daro saamayn kara Bariga Afrika iyo caalamka oo dhan.
Qaraxyo amaanka qal qal galiyay oo Boosaaso xalay ka dhacay
Qaraxyo Bambaano ayaa xalay gil gilay magaalada Boosaaso Gobolka Bari, halkaasoo weeraro is xiga lagu kala qaaday labo Saldhig Ciidamada Booliska Puntland lahaayeen.
Sida ay sheegayaan wararka Qaraxyadan ayaa dhacay xilli Ciidamada ammaanka wadeen howl galo ammaanka lagu sugayay, taasoo maalmihii la soo dhaafay ay dad ugu soo qab qabteen.
Afhayeen u hadlay Booliska Puntland ayaa sheegay in aanay ka heebeysan doonin cid kasta hadii lagu soo xad gudba amniga, ayna tallaabo cad ka qaadayaan kooxaha amni darada wada.
Qaraxii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo baxaya warar is khilaafsan, waxaana jira dhaawacyo soo gaaray Ciidamada booliska, inkastoo aan tiro dhab la heyn.
Labo maalmood ka hor ayay aheyd markii Maxkamada Darajada Koowaad ee Boosaaso xukun ku riday ragg ay ku eedeeyeen in ay maleegayeen falal ammaan daro.
Qaraxyada ka curta Puntland ayaa ifafaalo u noqon kara kacdoon laga yaabo inuu la kulmo Maamulka Rajiimka oo falal qab qabasho ku hayay dadka asalkooda ka soo jeeda Gobolka Ogaadeeniya oo dhibaatooyinka Ciidamada Ethiopia ugaga soo cararay deegaanadoodii.
Uganda oo lacag magdhow ah uga raadineysa M/Afrika askartii ku soo wax yeellowday Soomaaliya
Dowladda Uganda ayaa ka dalbatay Midowga Afrika in si deg deg ah Magdhow looga bixiyo askartii uga le'atay Soomaaliya tan iyo markii ay howl galka u tageen, iyadoo falkii u dambeeyay Ciidamadooda dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray qaraxyadii ismiidaaminta.
Afhayeen u hadlay Wasaarada Gaashaandhiga Uganda oo lagu magacaabo Felix Kulayigle ayaa sheegay in Midowga Afrika ka doonayaan Magdhowga askartii dhowaan ku waxyeelowday qaraxyadii Ismiidaaminta ee 17-kii September lagula eegtay Xaruntii Xalane.
Askar Uganda uga dhaawacantay weerarkii is qarxinta ayaa gaarayay ilaa 21-askari kuwaasoo Cusbitaal ay ku jireen ka baxay, waxaana Uganda ay ku doodeysaa in ay hesho Magdhowga askartaas.
Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa la sheegaa in askarigii dhinta loo qoondeeyay lacag dhan 100-Kun oo doolarka Mareykanka oo la siinayo eheladiisa, halka askariga dhaawacma uu Magdhow ahaan u helay Lacag dhan 50-Kun oo doolar.
Midowga Afrika ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ilaa 5-kun oo askari kuwaasoo ka socda Dowladaha Uganda iyo Brundi, waxaana ay la kulmaan weeraro is qarxin ah iyo iska hor imaadyo toos ah oo kala horyimaadaan Kooxo Islaamiyiin ah.
Xujaydii ugu horay oo xalay ka dhooftay garoonka aadan cade ee magalada muqdisho
Waxaa maqribnimadi xalay ka dhoofay garoonka diyaaradaha caalamiga ah Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Xujeydi ugu horeysay ee kaga baxda Xajka sanadkan dalka Soomaaliya iyadoo maalmaha soo aadana lagu wado ay garaan dalka Sacuudiga xujey kale.
Xujeyda ka dhooftay shalay ayaa waxaa qaaday diyaarada Jubba Air ways ee ka mid ah diyaaradaha maxalliga ah ee ka howlgala Soomaaliya waxaana lagu dejiyey xalay magaalada Jeddah ee dalkaasi Sacuudi Carabiya.
Sarkaal ka tirsan Shirkada Jubba ayaa u sheegay warbahinta in ay bilaabatay daabulida Xujeyda Soomaalida ee sanadkan doonaya in ay gutaan Waajibaatka Xajka oo ah mid ka mid ah Tiirarka Islaamka.
Sarkaalkan ayaa sheegay in xujeyda Soomaalida marka hore la geyn doono magaalada Jeddah halkaas oo ay ku diyaarsan yihiin baabuur loogaga sii gudbin doono magaalooyinka Makah iyo Madina hadba meesha uu Xaajigu doonayo in la geeyo.
Baabuurtaasi ayaa waxaa diyaarisay Waaxda Xajka ee Boqortooyada Sacuudiga oo ah Waax kala habeysa dhamaan howlaha ku tacaluqa Xajka sanad walbaa, waxaa ay xarumo ku leeyihiin dhamaan magaalooyinka dalka Sacuudiga.
Soomaaliya ayaa sanad walba waxaa ka baxa kumaan Muslimiin ah oo soo guta waajibaadka Xajka,i nkastoo saddexdii sano ee la soo dhaafay ay kor u kacday qiimaha lagu raaco Diyaaradaha ka shaqeysa Soomaaliya iyo Sacuudiga
Sacuudiga oo xayiradii ka qaday xoolaha somaliya laga soo dhoofiyo
Boqortooyada Sacudi carabiya ayaa si rasmi ah uga qaaday xayiraadii saarneed xoolaha Soomaalida kadib markii sicirka hilibka ee wadanka sacudiga uu sara u kacay xili ay soo dhawdahay Ciidul Adxaa.
Dowlada boqortooyada Sacuudi carabiya ayaa u ogalaatay shirkadaha dalkeeda in ay xoolo ka keensankaraan wadanka Soomaaliya iyadoona shirkadahaasi ugu baaqday in ay soo iibsadaan xoolo cafimaad qaba sida waafaqsan sharciyada caalamiga ah ee xoolaha.
Wasaarada biyaha iyo beeraha ee wadanka Sacuudiga ayaa sheegtay in arintani ku aadan xayiraad ka qaadista xoolaha Soomaalida ay timid kadib markii sara u kac uu ku yimid qiimaha xoolaha nool ee suuqyada dalkaasi iyadoona ay soo dhawaatay ciidii barakeesneed ee cidul Adxa iyo xilligii xajka.
Arintani ayaa waxaa ay saameen ku yeelaneysaa xoolaleyda iyadoona ay suurta galtahay in ganacsatada xoolaha ay qaaliyeeyaan qiimaha suuqyada Soomaalida lagu iibiyo xoolaha nool waxaana jira xoolo dhaqato badan oo soo dhaweeyay xayiraada laga qaaday xoolaha nool ee loo iibgeeyo Sacuudiga.
Hadaba Meelaha sida weyn go'aanka looga soo dhoweeyay waxaa ka mid ah Somaliland iyo guud ahaan koonfurta somalia
Ruunkinet, Abdirashid "Rashka"